Shiinaha Naqshadeynta cusub 35W UV jeermiska jeermiga ee soosaaraha iyo alaab-qeybiyeha | Kanfur
1. Astaamaha ugu muhiimsan ee 35w UV jeermiska nalka
Waxyaabaha tuubbada: Quartz UV lamp
Nolosha adeegga: 8000 saacadood
Waxqabadka: Waqtiga seddex-garsoor (15min, 30min, 60min), dib udhac bilow iyo fogfog fog fog.
Heerarka fiilada: heerka qaranka, Heerka Mareykanka (Shahaadada UL), heerka Yurub.
Cabbirka: 15 * 15 * 25.5 (CM)
Dammaanad ： 12 bilood oo damaanad ah
2. Waxqabadka iyo Codsiga iftiinka jeermiska UV
Iftiinka jeermiska gudaha ee UV Ozone wuxuu ku habboon yahay jeermiska, jeermiska
ka saarida jirka. Iftiinka loo yaqaan 'Ultraviolet light' wuxuu ku faafi karaa gees walba oo qolka ah, nadiifi karaa hawada isla markaana ka saari karaa urta. Sii qolkaaga jawi caafimaad oo caafimaad leh 99.9%
Iftiinka UV-ga ayaa lagu aaminay in loo isticmaalo sunta lagu guuleysto ee hawada iyo dusha sare ee warshado badan.
Tayo sare leh: Ka samaysan tiir adag oo adag oo iska caabin ah. Ku habboon aagga qolka illaa 30㎡, waqtiga hawlgalka wax ku oolka ahi waa 15 daqiiqo oo isku meel ah.
Waxaa lagugula talinayaa inaad u guurto meelaha faraqa badan si aad u hesho nadiifin wanaagsan.
Amniga: Otomaatiga ku xidho saacad leh 15/30/60 daqiiqado dejin, 15 ilbidhiqsi oo dib u dhac ah si aad u bilowdo, si loo hubiyo in dadku si nabadgelyo leh uga baxaan. Remote-control oo ay ku jirto kuu ogolaanaya inaad daarto / demiso ama dhigay saacad fog.
Codsiyada: Way ku habboon tahay lana qaadan karaa in lagu isticmaalo guriga, dugsiga, xafiiska, isbitaalka, shirkadda iyo meelaha kale sida qolkaaga jiifka, qolka fadhiga, jikada, musqusha…
Fiiro gaar ah: Iftiinka UV-ga wuxuu soo saari doonaa iftiin aad u xoog badan oo jeermiska ka dhiga fayraska. Sidaas darteed Waxay u dhaawici doontaa maqaarkaaga iyo indhahaaga oo la mid ah marka qoraxdu kuu dhacdo. ,
Fadlan ha ugu dhawaanin nalkaan markii uu shidan yahay (codso xayawaankaaga, dhirtaada, iyo kuwa kale.).
Markay iftiinkan jeermiska dileyso, waxay soo saari kartaa urta urta oo la mid ah ukunta xumaatay, toonta, ama timaha gubanaya ...
Gabi ahaanba waa hagaagsan tahay, maxaa yeelay urtaasi waa mid muuqata inay muujineyso in iftiinka uu jeermis dilayo taasina waxay sii deyneysaa urta ka baxsan deegaanka.
Hore: 36W Germicidal UV light jeermiska guriga
Xiga: Nalalka gacanta lagu qaato ee laambadda jeermiska jeermiga ee la iska qaado
Nalalka nadiifinta hawada ee UV
nalka jeermiska uvc
laambad UV la qaadan karo
laambadda jeermiska lagu dilo
laambada jeermiska looga dhalo 'ultraviolet'
uv laambad jeermis
nadiifinta qolka isbitaalka uv
nadiifiye qolka uv
35W UVC Ozone Ultraviolet Germicidal Siraad Quart ...
warshad si toos ah iibinta nadiifinta hawada 253.7nm ...
Wareegga jeermiska yar ee ultraviolet light ozone ste ...
Disinfec qalabka gacanta lagu qaadan karo ee cusbitaalka ...